पुतली Staxx को को छ सबै भन्दा राम्रो मोबाइल अनलाइन स्लट खेल सुन्दर प्रकृति र यसको सिर्जनाहरू को विषय मा आधारित. यो खेल मा, यो सबै रंगीन राम्रो फूल र पुतलीहरु बारेमा छ. खेल पाँच रील र चालीस betways द्वारा संचालित छ तपाईं प्रतीक जीत Combos बनाउन मद्दत. को रील पहाड घेरिएको एक रहस्यवादी नदीको पृष्ठभूमि विरुद्ध सेट, घाँस र रूखहरू. प्यारा बैजनी फूल तन्तु संग रूख उज्ज्वल तारा संग रात आकाश मुनि धेरै आकर्षक देखिन्छ. एक mesmerizing मनन संगीत निरन्तर बस जादुई सुनिन्छ कि पृष्ठभूमिमा प्ले छ. यो खेल मा सट्टेबाजी £ 0.20 मा सुरु र अधिकतम £ 400 एक स्पिन सीमा मा सेट गरिएको छ
पुतली Staxx विकासकर्ता बारेमा
यो सुन्दर थिम्ड सबै भन्दा राम्रो मोबाइल अनलाइन स्लट खेल NetEnt भन्दा अन्य कुनै पनि विकास भएको थियो. एक नाम क्यासिनो खेल पनि खेलाडीहरू monies जीत मदत मार्फत अनलाइन मनोरञ्जन लागि लोकप्रिय. तिनीहरूले स्लट खेल को कला तिनीहरूलाई मास्टर बनाएको छ कि एक धनी लगभग दुई दशक को यस उद्योग मा अनुभव आउन.
यस मा रंगीन प्रतीक हो सबै भन्दा राम्रो मोबाइल अनलाइन स्लट खेल कि रील प्रभावशाली हेर्न बनाउन. त्यहाँ रातो, आफ्नो शर्त मा 60x को उच्चतम इनाम तिर्ने चमकिलो उज्ज्वल पुतली साथ गुलाबी र बैंगनी फूल. जब आफ्नो प्रतीक पाँच एक payline देखा फूल प्रतीक 40x प्रत्येक तिर्न. तपाईं पनि ऐस गर्न ज्याक कार्डहरू प्ले को प्रतीक नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ तपाईं बोनस सुविधाहरू देखि जीत मदत थप दुई फूल प्रतीक हो. तिनीहरूले एक लैवेंडर रंग फूल र पत्रदलको धेरै रंग अर्को एक हो.
जंगली प्रतीक: multicolored पत्रदल संग फूल जंगली छ र सबै आधार प्रतीक स्क्याटर पल्ट यो कवर. यो सबै रील मा देखिन्छ र तपाईंले परिस्कृत संयोजन बनाउन मद्दत गर्छ.
स्क्याटर प्रतीक: को लैवेंडर फूल प्रतीक यस को स्क्याटर सुविधा छ सबै भन्दा राम्रो मोबाइल अनलाइन स्लट खेल. यो प्रतीक तीन वा बढी उपस्थिति संग, तपाईं सात मुक्त स्पिन गर्न पाँच जित्न सक्छौं. यी spins समयमा, तपाईं रेशमको कोयो प्रतीक देखा पर्न मात्र आशा गर्न सक्छौं. के तपाईं हेर्न आवश्यक पुतलीहरु परिणत र उड भन्ने रील को बाँकी सबै भन्दा गर्न चमकिलो हुन्छन्. तिनीहरू सबै spins को अन्त सम्म आफ्ना टाँसिएको रहने, आफ्नो बाटो मा संयोजन पेआउट विजेता तपाईं दिने.
एक जादुई विषय र रंगीन ग्राफिक्स संग, यो सबै भन्दा राम्रो मोबाइल अनलाइन स्लट खेल तपाईंबाट जित्न सक्छौं विभिन्न अवसर प्रदान गर्दछ.
Jackpot Total £189813.88
Jackpot Total £87606.62
Jackpot Total £40930.62
Jackpot Total £22255.44
Jackpot Total £16603.27
Jackpot Total £11479.37
Jackpot Total £10302.32